कस्तो हुनसक्छ सहमति र सहकार्य ? | himalayakhabar.com
हिमालयखबर संवाददाता | 22nd Jun 2017, Thursday | २०७४ आषाढ ८, बिहीवार ११:४३
शुक्रबार साँझ ड्यालसमा चर्चा चल्यो–‘लौ गौरी जोशीले त वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बसेर अध्यक्षमा डा. केशब पौडेललाई सहमति जनाएछन् ।’
त्यही साँझ ब्लड डोनर्स टेक्सस च्याप्टरका पूर्ब अध्यक्ष बासु श्रेष्ठद्वारा आयोजित पार्टीमा अर्को हल्ला आयो–‘डा. केशब पौडेललाई एनआरएन आइसिसीमा लैजान शेष घलेदेखि लिएर जीवा लामिछानेले समेत सहयोग गर्ने बचन दिए । अब पौडेलले अध्यक्षको उम्मेदवारी छाड्ने भए । उनले गौरी जोशीलाई समर्थन गरे ।’
ड्यालसका मात्र नभएर अमेरिकामै नेपाली समुदायमा गिनेचुनेका व्यक्तित्वहरुको सहभागिता थियो यी दुबै कार्यक्रममा । तर यथार्थतामा दुबै हल्लामात्र थिए । शनिबार साँझ ड्यालसको नेपाली समाजमा असाध्यै सकृय टीका पौडेलद्वारा आयोजित पार्टीमा आफ्ना शुभचिन्तक र समर्थनमा देखिएको शंका निवारण गर्दै जोशी भन्दैथिए–‘म आफ्नो अभियानबाट एक कदम पनि पछि हटेको छैन । म पछि हटेको कुराहरु कपोलकल्पित हल्लाहरुमात्र हुन् । मेरा शुभेच्छुकहरुमा म प्रति आशंका उव्जाउने नियतले ती हल्लाहरु फिँजाइएको मात्र हुन् ।’
हिमालय खबर प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै जोशीले सहमतिका लागि आफू सदा तत्पर रहेको उल्लेख गरे । ‘तर सहमतिका नाममा आफूलाई विश्वास गरेर सहयोग गर्न तयार साथीहरुको भावनालाई खेलबाड गरेर धोका दिन्न’ उनले भने ।
उसो भए के बितेको सप्ताहमा एनआरएन अमेरिकाको भावी नेतृत्वका विषयमा कुनै खिचडी पाकेको होइन त ? यो प्रश्न भने एनआरएनप्रति चासो राख्ने जो कोहीको मन मस्तिष्कमा घुमिरहेको विषय हो । नेपाली जनजीब्रोमा एउटा भनाई छ नि–हावा नचली पात पनि हल्लिदैन ।
हो, गत साताका केही दिन अध्यक्ष पदका सबैभन्दा बलिया भनिएका दुई उम्मेदवारहरु गौरी जोशी र डा. केशब पौडेलबीच सहमति गराउने प्रयास दुबै निकटहरुले भरमग्दुर गरेका हुन् । त्यसैको संकेत स्वरुप बिहीबार जोशीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफू सहमतिका लागि तयार भएको उल्लेख गरे ।
तर जोशीको गुनासो पनि छ । उनले सहमतिका लागि आफूमात्र निहुरिनुपर्ने, हात लम्काउनुपर्ने व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको बताए । ‘सहमति भनेको म सबै कुरा सुम्पिदिएर सर्वाङ्ग नाङ्गो हुन्छु भनेको होइन, सहमति गर्ने हो भने व्यक्तिको क्षमता, चाहना अनुसार त्यही अनुसारको पदमा लैजाने वातावरण हुनुपर्छ । मैले मात्र सबै त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुुसार पछिल्लो समयमा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी डा. पौडेल र राम सी पोखरेललाई एनआरएन आइसिसीमा उचित स्थान दिएर जोशीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका पदाधिकारीहरुले पहल थालेका छन् । नेपालदेखि लिएर अमेरिकासम्म सम्मानित चिकित्सक पेशामा संलग्न रहेको, अमेरिकामा पनि प्रगति गर्ने नेपालीहरुको सूचिमा अगाडि नाम आउने, एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष रहेर काम गरिसकेका कारणले उनी आइसिसीमा पुग्नु एनआरएनकै प्रतिष्ठाको विषय हुने भएकाले उनका पक्षमा पहल सुरु नभएको होइन ।
गौरी जोशी र राम सी पोखरेल दुबैजना ड्यालसबासी रहेका तथा स्थानीय नेपाली समाज टेक्सस (एनएसटी) को अध्यक्ष भैसकेका कारण दुबै उम्मेदवार हुनु घातक हुने विश्लेषण यहाँका नेपाली अगुवाहरुको छ । त्यसो हुँदा अमेरिकामा सफल व्यबसायीको सूचिमा रहेका वर्तमान उपाध्यक्ष राम सी पोखरेललाई समेत आइसिसीमा लैजाने कसरथ सुरु भएको हो ।
विगतको एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा भएका अनियमितता, अनेकन मुद्धा मामिलाका कारण पौडेललाई आइसिसीमा रातो कार्पेट बिच्छ्याउन धेरैलाई नैतिक अप्ठेरो परेको छ । यद्यपी डा. पौडेललाई आइसिसीमा लैजाने हो भने एनआरएन आइसिसीको प्रतिष्ठामा एउटा इट्टा थप हुनेछ । त्यस्तै पोखरेललाई आइसिसीमा लैजान सकेमा टेक्ससको नेपाली समुदाय विभाजित हुने खतराबाट मुक्त हुनेछ ।
‘आइसिसीमा पौडेललाई एउटा पद निश्चित भएमा भोलीनै उनी एनआरएन अमेरिकाको संभावित अध्यक्षको उम्मेदवारको सूचिबाट आफूलाई खुशीसाथ हटाउनेछन्,’ पौडेलका असाध्यै निकट जनसम्पर्क समितिका एक नेताले हिमालय खबरसँग भने । आइसिसीमा आफ्नो पद सुरक्षित गराउनका लागि अहिले उनले जोशीको समेत सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
एनआरएन अमेरिकाको वर्तमान निकम्मा कार्यसमितिले निर्वाचनको तिथिमिति समेत नतोकेर चलखेल गर्ने मैदान उपलव्ध गराइरहेको छ । एनआरएनका सदस्य÷मतदाताहरुमा एकखालको आक्रोश पैदा भएको छ । मे महिनामा हुनुपर्ने निर्वाचन जुनको अन्तिम हुन लाग्दा समेत गर्नेत छाडौँ चुनावी कार्यतालिका समेत सार्वजनिक नगरेर असारमै लाखेनाच देखाइरहेको छ ।
जोशीका विषयमा अनेक हल्ला हुन थालेपछि स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा नेपालमा रहेका जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्टले आफु निकट तथा विश्वासपात्र विनोद भट्टलाई शनिबार ड्यालस पठाएका थिए ।
भट्टले जोशीलाई भेटेर जनसम्पर्क समितिको सहयोग र समर्थन रहने बचन दिएका छन् । शनिबार र आइतबार बिहान ड्यालसमा जोशी र भट्ट लगायत जनसम्पर्क समितिका शुभेच्छुकहरुको छलफल समेत भएको थियो ।
जोशीलाई जनसम्पर्क समितिले निर्णयनै गरेर पूर्ण रुपले समर्थन गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन । तर सभापति विष्ट लगायत उनी निकट अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा रहेका सदस्यहरुले खुलेर सहयोग र समर्थन गर्ने संकेत देखिएका छन् । शुक्रबार दिउँसो जोशीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सहमति गरेको बजारहल्ला फिँजिन नपाउँदै उनलाई ढाढस दिनकै लागि नर्थक्यारोलाइनाको मोरिसभिलदेखि भट्ट शनिबार बिहानै ड्यालस उत्रेका थिए ।
भट्ट जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको स्थापनादेखिनै बिभिन्न पदमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । तीनवर्ष अघिको ड्यालस अधिवेशनमा उनी विष्ट समूहबाट महासचिवका उम्मेदवार थिए ।
जनसम्पर्क समितिमात्र होइन, जोशीलाई प्रवासी मञ्चको समेत साथ र समर्थन रहने संकेत देखिएको छ । ‘गौरीजीको यत्तिको लहर, उहाँलाई यस्तो साथ र समर्थन नत हिजो थियो, नत भोली हुनेनै छ,’ प्रवासी मञ्चका नेता कमल ओझाले भने । गौरीको उम्मेदवारीका कारण मञ्चले एनआरएनको अध्यक्षमा कोहीकसैलाई पनि आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन ।
जोशीलाई राप्रपा निकट प्रवासी संस्थाका अध्यक्ष श्री पराजुलीले समेत सहयोग र समर्थनको वचन दिएका छन् । तर, जोशीको सन्दर्भमा धेरै शूभचिन्तकहरुको गुनासो सुनिएको छ र देखिएको पनि छ । ‘जोशीले समाजमा असल छबी नभएकाहरुलाई बोक्नु उनकै लागि घातक हुनेछ, त्यसतर्फ गंभिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनका एक शुभचिन्तकले हिमालय खबरसँग भने ।
अवस्था कतिसम्म भने केही व्यक्तिहरुले आफूलाई जोशी प्यानलको बिभिन्न पदहरुको उम्मेदवार भन्दै आएका छन् । आफूलाई जोशी प्यानलको उम्मेदवार दावी गर्ने एक व्यक्तिले शुक्रबार साँझको पार्टीमा अपशव्द बोल्दै अलाप विलाप गरिरहेका थिए ।
एनआरएन अमेरिकाभित्र यतिखेरको जरुरी भनेको सहमति र सहकार्यनै हो । जसका लागि डा. पौडेल र राम सी पोखरेल जस्ता अनुभवी व्यक्तिहरु आइसिसीमा जानु उचित हुने धारणा अधिकांश अमेरिकी–नेपालीहरुको छ । गौरी जोशी जस्ता केही गरौँ भन्ने उत्साह बोकेका र युवाहरुमा लोकप्रियलाई एनआरएन अमेरिकाको जिम्मा दिँदा सबैभन्दा न्याय हुने धारणा बौद्धिक समुदायको छ । यहीनै सहमति र सहकार्यको थालनी हुनसक्ने संभावना छ ।
परिवारका सदस्यको एकै इमेल आइडी भएपनि मान्य हुने
२०७४ आषाढ ८, बिहीवार ११:४२
हिमालयखवर संवाददाता- ड्यालस (टेक्सस) । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको निर्वाचन समितिले सदस्यता वैधानिकताको सन्दर्भमा इमेल संबन्धि नयाँ निर्णय गरेको छ ...
२०७४ आषाढ ८, बिहीवार ११:४५